Nanitatra tolotra fanokafana vaovao ho an'ny vondrona ny Blossom Hotel Houston
Home » Lahatsoratra farany farany » fivoriana » Nanitatra tolotra fanokafana vaovao ho an'ny vondrona ny Blossom Hotel Houston
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao lafo vidy • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • Tourism • Fifanarahana Travel | Torohevitra momba ny dia • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny fanampim-baovao farany amin'ny sehatry ny trano fandraisam-bahiny mihaja ao Houston, Blossom Hotel Houston dia namoaka tolotra fe-potoana voafetra natao hanampiana ireo mpikarakara hetsika hanararaotra ny fivoriany. Avy amin'ny fahazoana isa telo tsy fivadihana sy ny fahazoana tamberim-bidy hatramin'ny 5% amin'ny faktioran'ny tompony ka hatramin'ny fitsitsiana malala-tanana amin'ny fitaovana an-tsary sy ny taham-pifaliana amin'ny trano fandraisam-bahiny, ireo matihanina MICE mitady hampiantrano ny hetsika manaraka any Houston dia hahita zavatra maro ho tiana.
Eo anelanelan'ny 31 Desambra 2021 izao, ny New Hotel Promotion dia manolotra karazana fifanarahana manokana.
Azo amboarina eo anelanelan'ny 1 Janoary 2022 sy 31 Martsa 2022, ny fampiroboroboana Enhance Your Event dia manome tombony fanampiny ho an'ny mpandrindra fivoriana.
Blossom Hotel Houston dia manana habaka hetsika 9,000 metatra toradroa ho an'ny fivoriambe, fihaonambe hybrid, fampisehoana varotra, seminera, fitsangatsanganana mpanatanteraka ary atrikasa.
Miorina eo akaikin'ny kianjan'ny NRG sy ny Texas Medical Center, Blossom Hotel Houston dia manana habaka hetsika 9,000 metatra toradroa izay manome voninahitra ny filan'ny vondrona tsirairay, ao anatin'izany ny fivoriambe, fihaonambe hybrid, fampisehoana varotra, seminera, fitsangatsanganana mpanatanteraka ary atrikasa. Ny efitrano fihaonambe lehibe, ny Luna Ballroom, dia mirehareha amin'ny fahaiza-manaon'ny haino aman-jery manara-penitra ary mahazaka olona hatramin'ny 250, ary misy faritra midadasika mialoha ny asa. Miaraka amin'ny lohahevitry ny loko mampitony sy aingam-panahin'ny volana ary ny fikitihana luxe, ny efitrano fisakafoana dia manolotra toerana tonga lafatra ho an'ny fampakaram-bady sy lanonana ara-tsosialy. Ny breakouts sy ny fivoriana kely kokoa dia azo atao ao amin'ny efitrano fivoriana sivy fanampiny miaraka amin'ny drafitry ny gorodona azo esorina sy ny firafitry ny seza mba handraisana ny fomba hetsika rehetra avy amin'ny fivoriana birao mpanatanteraka sy ny fampisehoana amin'ny fomba teatra mankany amin'ny sakafo maraina amin'ny tamba-jotra tsy ara-potoana sy ny famelabelarana ara-teknolojia.
Mihatra amin'ny hetsika misy vahiny 10 farafahakeliny no namandrika sy natao teo anelanelan'ny 31 Desambra 2021 izao, ny Fisondrotana Hotely Vaovao manolotra karazana fifanarahana manokana:
Mihena 5% amin'ny faktiora master amin'ny fiampangana rehetra mety
Politikan'ny attrition flexible
Efitrano iray maimaim-poana ho an'ny efitrano 35 voafandrika
Savings amin'ny trano fandraisam-bahiny mpiasa
Mitahiry 20% amin'ny fitaovana audiovisual
Wi-Fi mahazatra maimaim-poana ao amin'ny efitrano fatoriana sy fivoriana
Pass parking 10 maimaim-poana.
Azo amboarina eo anelanelan'ny 1 Janoary 2022 sy 31 Martsa 2022, ny Hatsarao ny hetsikao Ny fampiroboroboana dia ahafahan'ny mpandrindra fivoriana manao famandrihana efitrano fandraisam-bahiny 10 farafahakeliny isan'alina ary/na mandany $1,000 farafahakeliny amin'ny sakafo mba hisafidianana tombontsoa roa:
Mihena 3% amin'ny faktiora master amin'ny fiampangana rehetra mety
Fiatoana kafe iray maimaim-poana (60 minitra fanompoana mitohy)
Wi-Fi nohatsaraina maimaim-poana amin'ny toerana fivoriana
Points Planner Triple Stash Rewards.
Ny kojakoja ao amin'ny hotely misy rihana 16 dia ahitana efitrano fandraisam-bahiny sy suite 267 mihaja, ahitana efitra fandraisam-bahiny malalaka, hazavana voajanahary be dia be ary haingon-trano voadio sy minimalista. Ny trano fandraisam-bahiny koa dia manolotra kojakoja lafo vidy hafa, ao anatin'izany ny foibe ara-panatanjahantena 24/7 natokana ho an'ny Peloton®; dobo ambony tafo sy efitrano fandraisam-bahiny mirehareha ny fomba fijery mahafinaritra ny afovoan-tanànan'i Houston. Raha mila famandrihana sy fampahalalana bebe kokoa momba ny tolotra, tsidiho azafady BlossomHouston.com.
Momba ny Blossom Hotel Houston
Blossom Holding Group dia hanomboka tsy ho ela ny foto-kevitra amerikana voalohany, Blossom Hotel Houston, traikefa iraisam-pirenena vaovao miorim-paka lalina ao amin'ny Space City. Ny trano fandraisam-bahiny dia mametraka vahiny kely miala amin'ny tobim-pitsaboana lehibe indrindra eran'izao tontolo izao sy ireo orinasa sy toeram-pialam-boly malaza indrindra ao Houston, ary amin'ny maha-trano fandraisam-bahiny akaiky indrindra amin'ny NRG Stadium, dia minitra vitsy miala amin'ny toerana malaza Houston ihany koa. Na mandeha amin'ny filàna ara-pitsaboana, na raharaham-barotra na fialamboly, ny vahiny dia afaka mankafy ny fahasamihafan'i Houston, izay hita taratra ihany koa amin'ny trano fandraisam-bahiny tsara tarehy mankany amin'ny fototry ny aerospace ao an-tanàna, raha manararaotra ny fivarotana antsinjarany ao amin'ny hotely, trano fisakafoanana roa mifantoka amin'ny chef, kojakoja tsy manam-paharoa. sy serivisy, efitrano fandraisam-bahiny mirentirenty ary toerana fanaovana hetsika sy fivoriana maro. Raha mila fanazavana fanampiny dia tsidiho azafady BlossomHouston.com Na hanaraka anay Facebook ary Instagram.